News - Page - 13
जीतु र रिनाशालाई वर्ष व्यक्ति, बिष्णुलाई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान
फिल्मीखबर वर्ष व्यक्ति र पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
‘जानी नजानी’मा पुराना चलचित्रको रंग आउँदैन –बसन्त अधिकारी, निर्देशक
हरेक चलचित्रमा नयाँ कथा, निर्देशक अनुसार हरेक चलचित्रमा नयाँ टेक्निक बसन्तले सहायक/मुख्यसहायक निर्देशक हुँदा धेरै कुरा सिक्न पाए । त्यही सिकाइले चलचित्र ‘जानी नजानी’को निर्देशक बनायो ।
दुई निर्माता संघ बिच एकिकरण, बाहिर एउटा भित्र अर्को सहमति !
भवन निर्माण कोषमा ३२ लाख रहेको दबी गर्दै आएको खड्का समूहले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै अन्ततः नयाँ संघ खोलेको थियो ।
नेपालको सबै कुरा मन पर्छ – गुल्शन ग्रोबर
तेस्रोपटक नेपाल आएका ग्रोबरले आफुलाई नेपालको सबै कुरा मन पर्ने जनाएका छन् । नेपाली खाना, नेपालको सुन्दरता र कल्चर मनपर्ने बताएका ग्रोबरले...
जानी नजनी लभ स्टोरी चलचित्र हो । यद्यपी यसभित्र खादिलो कन्टेन पनि भएको निर्माता तथा कलाकार रोशनी केसीले बताएकी छिन ।
मेलिनाको आवाजमा ‘नाम हो मेरो नेपाल’
राष्ट्रिय भावको गीत ‘नाम हो मेरो नेपाल’ सार्वजनिक भएको छ । गायिका मेलिना राईको स्वरमा रहेको गीतलाई गणेश शाहीले लेखेका हुन । गीतमा रप्रबिन र गणेशकै संगीत रहेको छ ।
चलचित्र हली बन्ने भएको छ । राजधानीको ज्ञानेश्वरमा रहेको ज्ञानेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा शुभ साईत गर्दै चलचित्र निर्माणको जानकारी दिइएको हो ।
लेन्सनेपालकर्मी बिष्णुलाई पत्रकारिता पुरस्कार, जीतु र रिनाशा वर्ष व्यक्ती घोषित
लेन्सनेपालकर्मी बिष्णु प्रसाद सुबेदी पुरस्कृत हुने भएका छन् । यस्तै वर्ष व्यक्ति जीतु र रिनाशा चयन भएका छन् ।
भद्रगोलको ‘पाँडे’ पात्र प्रति पाण्डे समाजको आपत्ति, ‘पाँडे’को अभिनय गर्ने अर्जुन भन्छन् क्यारेक्टर परिवर्तन हुँदैन
भद्रगोलका लेखक तथा निर्देशक मध्येका एक अर्जुन घिमिरेले कसैले आपत्ति जनाउँदैमा ‘भद्रगोल’को चर्चित पात्र ‘पाँडे’को क्यारेक्टर परिवर्तन नहुने जनाएका छन् ।
‘शुभ लभ’को दोस्रो गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘शुभ लभ’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘टुक्रियो एउटा सपना’ बोलको मार्मिक गीतमा प्रेमी र प्रेमीका बिच आउने उतार चढावको कथा पेश गरिएको छ ।
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ ले चलचित्र ‘क्याप्टेन’को प्रशंसा गरेका छन् । काठमाडौंको कमलपोखरीमा रहेको विग मुभिजमा चलचित्र क्याप्टेन हेरेपछि सञ्चारकर्मीलाई...
चलचित्र ‘जानी नजानी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक
रोशनी इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ‘जानी नजानी’को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।
बिदुर गिरी र सुष्मा कार्कीलाई ‘सिम्पल’ सम्मान
चलचित्र पत्रकार बिदुर गिरी र अभिनेत्री सुष्मा कार्की ‘सिम्पल’ सम्मान २०७५ बाट सम्मानित भएका छन् ।
सलिन पुग्दा २० हजार दर्शक !
हेटौडामा जारी औधोगिक मेलामा सलिन चलचित्र ‘यात्रा’को प्रमोशनका लागि पुगेका हुन । सलिन पुगेको दिन महोत्सव हेर्न झण्डै २० हजारको हाराहारीमा दर्शक आएको...
मोफसलमा प्रचारलाई तिब्र बनाउँदै ‘साईली’
चलचित्र ‘साईली’ निर्माण टिमले मोफसलबाट आफ्नो प्रचारलाई तिब्रता दिएको छ । चलचित्रको टिम यतिबेला पूर्वमा पुगि पत्रकार भेटघाट तथा कलेज केन्द्रित प्रचारलाई तिब्रता दिइरहेको छ ।
‘जाइरा’ प्रदर्शन मिति घोषणा
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर २०७६ भदौ ६ गतेबाट चलचित्र ‘जाइरा’प्रदर्शन हुने भएको छ । सोमबार चलचित्रको प्रदर्शन मिति सार्वजनिक गरिएको हो ।
सपिङ्ग मलमा चलचित्र ‘कागजपत्र’
चलचित्र कागजपत्रले आफ्नो प्रचारलाई सपिङ्ग मल केन्द्रित बनाएको छ । पहिलो चरणमा उपत्यकाका मलमा चलचित्रको प्रचार गरिने निर्देशक अपिल बिष्टले बताएका छन् ।
बैशाख २७ मा ‘जात्रै जात्रा’, मंगलबार सार्वजनिक हुँदै ‘माया पिरिम’
छायाँकनकै समयमा नायक विपिन कार्कीको मोटरसाइकल दुर्घटना भएपछि रिलिज पोष्टपोण्ड भएको थियो ।
अधिकांश चलचित्रहरूमा पुरुषले क्रिया गर्दछन् भने महिला प्रदर्शित मात्र हुन्छन् वा भनौं उसलाई अझ सशक्त बनाउन महिलालाई प्रयोग गरिन्छ, कि त चलचित्रमा मसलाको रूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।
एयर होस्टेज बन्ने सपनाले उनलाई मुम्बई पुर्यायो । उनले एयर होस्टेज बन्नका लागि प्रयत्न नगरेकी पनि होइनन् । कतार एयरवेज, जेट एयरवेजलगायतमा एयर होस्टेजका लागि पुगेकी थिइन । तर, सफल हुन सकिनन् ।
सत्य–स्वरुपको क्रिकेट गीत सार्वजनिक
गायकद्वय सत्य–स्वरुपराज आचार्यले क्रिकेटलाई केन्द्रमा राखि गीत तयार गरेका छन् । ‘युद्धको मैदान’ गीतको भिडियोमा बन्न लागेको क्रिकेट रङ्गशालाका दृश्यहरु समावेश गरिएको छ
त्यो समयमा म व्याक भए भन्नु भन्दा पनि अलिकति आत्मनियन्त्रित भए ।
सेलिब्रेटी शोमा ‘क्याप्टेन’को प्रसंसा
सेलिब्रेटीहरुले चलचित्र ‘क्याप्टेन’लाई रुचाएका छन् । मंगलबार साँझ भएको सेलिब्रेटी शोमा चलचित्र हेरेका चलचित्रकर्मीबाट क्याप्टेनलाई प्रसंसा मिलेको हो ।
चलचित्र ‘पसिना’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘पसिना’को गीत सार्वजनिक भएको छ । युट्युबबाट ‘सुनैको दरबार’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । गीतलाई राजिव समिरले कोरियोग्राफी गरेका हुन् ।
‘लभ स्टेसन’को पहिलो ट्रेलर सार्वजनिक
चलचित्र ‘लभ स्टेसन’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘यात्रा’को गीत ‘चट्ट रुमाल’ सार्वजनिक, सलिन र सलोनको छमछमी
मंगलबार राजधानीको बिग मुभिजमा आयोजित कार्यक्रमका बिच ‘चट्ट रुमाल’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
बिकास बोर्डले चलचित्र जोगाउन सिकाउने
आइतबार साँझ बोर्डले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि उक्त कार्यशालाबारे जानकारी गराएको हो । बोर्डकै प्रिभ्यु थिएटरमा विहान ११ बजेदेखि कार्यशाला सुरु हुनेछ ।
नेपालमा छायाँकन गरिएको सोनु निगमको भिडियो सार्वजनिक
महाशिवरात्रीको अवसर पारी चर्चित भारतिय गायक सोनु निगमको स्वरमा रहेको शिव भजन सार्वजनिक गरिएको छ ।
चलचित्र ‘साइँली’को ट्रेलर सार्वजनिक
रामबाबु गुरुङ निर्देशित चलचित्र ‘साइँली’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘क्याप्टेन’को दुई दिने व्यापार – एक करोड ८५ लाख ग्रस
वितरक मनोज राठीका अनुसार क्याप्टेनले पहिलो दिन ६५ लाख र दोस्रो दिन एक करोड २० लाखको व्यापार गरेको हो ।
‘लभ स्टेशन’को पोष्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘लभ स्टेशन’को पोष्टर शुक्रबार रिलिज गरिएको छ । मुख्य कलाकार प्रदिप खड्का र जसिता गुरुङलाई समेट्दै तयार पारिएको सात पोष्टर सार्वजनिक गरिएको हो ।
१८ वर्ष पछि ‘चट्ट रुमाल’, दोहोरिएला त पहिलेको क्रेज
गीतको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा नायक सलिनमान पनि सँगै थिए । ओरिजिनल भर्सनमा नाचेका श्रीकृष्णको उचाईमा आफु नपुगेको भएपनि आफ्नो तर्फबाट बेष्ट दिएको उनको भनाई छ । उनले जसरी यो गीत भन्दासाथ पुरानो पुस्ताले श्रीकृष्णलाई सम्झन्छ त्यसैगरि अहिलेको पुस्ताले आफुलाई सम्झने समेत दाबी गरे ।
फ्राइडे रिलिज : ‘क्याप्टेन’ र ‘दि ब्रेकअप’
आजबाट दुई नेपाली चलचित्र ‘क्याप्टेन’ र ‘दि ब्रेकअप’ प्रदर्शन भएका छन् । क्याप्टेन स्टोट्स जनराको चलचित्र हो भने लभ स्टोरीको पार्ट पनि उत्तिकै शशक्त रहेको जनाइएको छ ।
किन दोहोरिदैनन् अनमोलसँग नायिकाहरु, अनमोल भन्छन् – नायिकाको सिफारिस गर्दिन
अनमोल केसीको फिल्मोग्राफीलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि नायिकासँग रिपिट काम गरेका छैनन् । अनमोलसँगका हरेक चलचित्र नायिकाका लागि डेव्यु नै भए ।
‘दि म्यान फ्रम काठमाडौं’को शिर्ष गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘दि म्यान फ्रम काठमाडौं’को शिर्ष गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार युट्युबबाट चलचित्रको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘मेरो एउटा साथी छ २’ बन्ने, दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने
चलचित्र ‘मेरो एउटा साथी छ २’ बन्ने भएको छ । आइकोर फिल्मस्को व्यानरमा बन्न लागेको चलचित्रलाई दिनेशले निर्देशन गर्ने भएका छन् ।
अनमोल राजेशको समकालिन ! राजेश र भुवनको एउटै स्वर – हाम्रो प्रतिष्पर्धा छैन
भुवनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘सुपरस्टार’मा राजेशलाई अफर गरिएको भएपनि उनले काम गरेका थिएनन् । त्यहीबाट भुवन राजेशसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको बताइन्छ ।
चलचित्र ‘साइनो’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘साइनो’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच लोकलयको ‘मायालुलाई जात्रैमा भेटियो’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘शुभलभ’को ट्रेलर सार्वजनिक, ज्योतिषीकै भुमिकामा ज्योतिषी अधिकारी
चलचित्र ‘शुभलभ’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । भिडियो साझेदरी सञ्जाल युट्युबबाट चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रियंका र आयुष्मान स्वच्छ वातावरण अभियन्ता नियुक्त
नायिका प्रियंंका कार्की र नायक आयुष्मान देसराज जोशी स्वच्छ वातावरण महाअभियानको अभियन्ताको रुपमा नियुक्त भएका छन् ।
अनमोललाई दर्शकले स्टार बनाएका हुन् – हेमराज बिसी
हेमराज बिसी निर्देशित चलचित्र ‘दि ब्रेकअप’ आउने शुक्रबारबाट प्रदर्शन हुँदैछ । सोही मितिमा अनमोल केसी अभिनित चलचित्र क्याप्टेन पनि प्रदर्शन हुँदैछ । यसअर्थ फागुन १७ गतेलाई लिएर चलचित्रबृत्तमा विभिन्न टिका टिप्पणी र बिश्लेषण भइरहेको छ । कुनै न कुनै रुपमा अनमोलसँग जोडिन खोजेको आरोप त उनले ‘दि ब्रेकअप’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा नै समाना गर्नुपरेको थियो ।
भुवन भन्छन् – अनमोल मेरो कव्जामा छैन, उसलाई प्रयोग गरेर पैसा कमाउन खोजेको पनि होइन
संख्याका हिसाबले बाहिरी व्यानरका चलचित्र धेरै भएपनि अनमोल पिता नायक तथा निर्माता भुवन केसी माथी एउटा आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो हो उनले अनमोलको क्रेजलाई आफै क्यास गर्न खोजेका छन् ।
जानी नजानीको ट्रेलर सार्वजनिक, निर्देशक भन्छन् – कर्पोरेट लेवलको प्रेमकथा
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच आगामी १ चैत्रबाट रिलिज हुने चलचित्र ‘जानी नजानी’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ
फ्राइडे फिल्म : ‘रुमालै छ चिनो’, ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ र ‘ब्वाईफ्रेण्ड’
आजबाट ३ नेपाली चलचित्र एकसाथ प्रदर्शनमा आएका छन् । चलचित्रहरु ‘रुमालै छ चिनो’, ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ र ‘ब्वाईफ्रेण्ड’ले प्रदर्शन
चलचित्र ‘कप्स’को गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘कप्स’को गीत सार्वजनिक गरिएको छ । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच चलचित्रको ‘तिमी र म’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
मेघालाई भेट्न पुगे प्रदिप, लभ स्टेशनले गर्यो एक लाख सहयोग
चलचित्र लभ स्टेशनको टिमले करेन्टबाट दुई हात गुमाएकी मोरङकी मेघा घिमिरेलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
चलचित्र ‘कागजपत्र’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका विच चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो ।
स्टारका कारण मात्र चलचित्र चल्दैन – अनमोल केसी
अनमोल केसी चल्तिका स्टार । अनमोलको उपस्थितिले पनि चलचित्रले बक्स अफिसमा कमाल गर्छ भन्ने बिश्वास धेरैमा छ । तर अनमोललाई भने स्टारका कारण मात्र चलचित्र चल्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छैन । स्टार पावरले वज क्रियट गर्ने र ओपनिङ्ग विजनेशमा प्रभाव पार्ने भएपनि चलचित्र सफल हुन स्टार मात्र नभएर कन्टेनपनि आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ ।
चलचित्र ‘साइँली’को दोस्रो गीत सार्वजनिक
चलचित्र ‘साइँली’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बुधबार सामाजिक सञ्जाल युट्युबबाट ‘प्याट प्याटे’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
‘जानी नजानी’ को क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजानिक
‘जानी नजानी’ को क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजानिक गरिएको छ । पोष्टरमा कलाकारहरुको क्यारेक्टरलाई प्रस्ट्याइएको छ ।
Results 1021: You are at page 13 of 21